Dhageyso: Qaramadda Midoobey oo Sheegtay In Degaanadi Laga Saarey Al-Shabab ay Ka Fulinayso Mashaariic kala Duwan. – idalenews.com
Kaaliyaha ayaa sheegtay in deegaanada olalaha mashaariicda ah ay ka fulinayaan gaarayaan ilaa iyo 25-degmo oo dhacda Koonfurta Soomaaliya,kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dagaalada u dhaxeeya Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo AMISOM oo dhinac ah iyo Ururka Al-shabaab.
Waxaa naga go’an inaan 10 milyan oo doolar oo ka imanaya Hanaanka Gurmadka Degdegga ah ee Sanduuqa Nabadaynta Qaramada Midoobay si degdeg ah ubixino,” ayay tiri Kaaliyaha Xoghayaha Guud Cheng-Hopkins. “Soomaaliya waxaa weli ka jira dhibaatooyin gudaha ah, welina waxaa ka jiirta dhibaatada Al-Shabaab iyo kooxaha kale, laakiin waxaa meelo dalka ka mid ah ka jira fursado ku filan oo ah inaan hadda maalgashano nabadaynta si ay nabaddu u waarto.
Maalintii 19kii bishii Maarso, Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay, ayaa ku dhawaaqay in 3 milyan oo doolar oo ka imanaya Sanduuqa Nabadaynta loo qoondeeyay si loogu taageero dadaallada xasilinta ee goobaha dhowaan la xoreeyay. Hawlgalka Qaramada Midoobay ee Kaalmaynta Soomaaliya oo la kaashanaysa Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ayaa iminka ku hawlan dhammeystirka mashruuca ugu horeeya si lacagtan loo soo daayo. Lacagta ay ku dhawaaqday Kaaliyaha Xoghayaha Guud Cheng-Hopkins waa mid dheeraad ah, waxaana la filayaa in arrimaha ay xoojinayso ka midyihiin tayada maamullada degaanada, fududeysana dadaalka dibuheshiisiinta heerka deegaanka, laguna maalgeliyo mashaariicda hawlaha guud ee kaabayaasha, oo ka shaqeeyaan dhallinyarada iyo kooxaha kale ee tabaaleysan.
Kaaliyaha Xoghayaha Guud Cheng-Hopkins waxay sheegtay in Sanduuqa Nabadaynta uu maalgelinayo baahida nabadaynta Soomaaliya iyadoo lala tashanayo Dowladda Federaalka Soomaaliya, madaxda gobollada, ururrada bulshada iyo deeqbixiyeyaasha.
“Hal mashruuc oo aan maskaxda ku hayno ayaa ah waxa aan u qaban karno dagaalyahanada ka soo goosta Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka kale, sidii aan dhallinyaradan bulshada dib ugu biirin lahayn anagoo barayna xirfad una fidinayna fursad nololeed si aysan dib ugu noqonin falalkii ay ku kacayeen oo ah sababta ka dambeysa xasillooni darrada ka jirta Soomaaliya,” ayay tiri.
Hadalka Kaaliyaha Xoghaya Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Taageerada Nabadaynta, Judy Cheng-Hopkins, ayaa ku soo aadaya xilli shalay ay soo gunaanadday booqasho shan maalmood qaadatay oo ay ku joogtay Soomaaliya.
Xogaga Al-shabaab oo Degmada Marka Weeraray.